Onu ogugu ndi agha: agha ka aghapu Netease: ya trailer | Gam akporosis
Onu ogugu agha nile: A mara ọkwa WARHAMMER site na trailer site na Netease na site na ihe anyị nwere ike ịhụ na ọ dị ka njikọta n'etiti Age of Empires, Nsogbu nke ndị ezinụlọ na ndị dike nke Ìhè na Ime Anwansi. Ee, ọ dị oke mma ma ọ bụ ya mere ọ gafere akụkụ ndị a iji bido iso ya.
Ọ bụghị egwuregwu mbụ na Warhammer eluigwe na ala na anyị na-ahụ na gam akporo, dị ka nke a na anyi na echekwa, ebe ọ bụ na e nwere ụfọdụ n’ime ha hapụrụ ọtụtụ ihe.
Netease no atwam Nakwa na beta mechiri emechi malitere n'afọ a nke Agha Agha: WARHAMMER. Egwuregwu nke atọ na Total War Battles na nke ahụ bụ mgbapụta nke Total War: Warhammer.
Ọ hapụrụ anyị ezigbo anya, ọ bụ ezie na anyị ka ga-echere ruo mgbe anyị nwalere ya, na egwuregwu ahụ na-esi na mkpọsa mkpọsa dịka ọ nwere ike ịbụ otu si na mmepeanya na ndị egwuregwu na otu ha, ruo na agha n'ezie iji banyekwuo n'ime ihe.
Anyị amaworị na trailers ndị a ha na-abụkarị compendium nke ihe nkiri na omume igwe, nke mere na mgbe e mesịrị anyị ga-anọdụ n’ihe dị mfe karị; tumadi na egwuregwu mkpanaka mgbe Nsogbu nke Clans dị anyị nso.
Ọ bụ ezie na ee, site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Agha Agha: WARHAMMER, emeela ka o doo anya na a ga-eji agha nke ọtụtụ puku nkeji mara ya. Y’oburu n’acho ibanye beta mechiri emechi n’ime izu ndi n’abia, echezola ihe obula ndebanye ugbu a na-otu nke kechioma ụmụ okorobịa na-agbalị a ọhụrụ egwuregwu tupu onye ọ bụla ọzọ.
Un Warhammer ohuru n'uzo di omimi nke mere na n'oge na-adịghị anyị pụrụ ịnụ ụtọ ụfọdụ gameplay video ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Netease na-ekwupụta Total War Battles: WARHAMMER na ụgbọala na-adọkpụ iji nweta anyị na sadulu